गधा भनी न होच्याउनुस्, संसारकै महंगो पनिर गधाकै दूधबाट बन्छ « Nepal Break
काठमाडौं । संसारमा खाने वस्तुको कुनै कमी छैन। एक से एक राम्रा,स्वादिष्ट र महँगा खाद्य पदार्थ रहेका छन् मानिसको ‘फुड चेन’मा। पनीर पनि यस क्रममा अति प्रचलित खाध्य पदार्थ हो।
अधिकांश मानिसले पनीरलाई बडो रुचिका साथ खाने गर्छन्। यति मात्र कहाँ हो र ! घरमा कुनै पाहुना आएको छ भने उसको आदर सत्कारका लागि पनीरकै तरकारी पकाउने प्रचलन समाजमा व्याप्त रहेको छ।
जस्तो कि तपाईंहरुलाई थाहा नै छ पनीर ‘एनिमल प्रोडक्ट’ हो। विभिन्न जनावरबाट प्राप्त हुने दुधबाट पनीर बनाइन्छ। गाई, भैंसी र बाख्राको दुधबाट बन्ने पनीरबारे तपाईंलाई थाहै होला। तर के तपाईंलाई थाहा छ सबैभन्दा महँगो पनीर कुन जनावरको दुधबाट तैयार हुन्छ ?
सर्बियामा एउटा यस्तो फार्म हाउस छ जहाँ गधा मात्रै पालिन्छन्। जैसाविका नामक यस फार्म हाउसमा पोथी गधाको दुधबाट पनीर बनाउने काम गरिन्छ। फार्म हाउसका मालिक स्लोबोदान सिमिक भन्छन् – मेरो फार्म हाउसमा २०० वटा पोथी गधा छन्। म यसको दुधबाट विभिन्न खाद्यपदार्थका साथै पनीर पनि बनाउछु।
उनका अनुसार गधाको दुधमा कैसीन (casien protein) प्रोटीन स्तर कम रहेकोले यस बाट पनीर बनाउन गाह्रो भयो। सामान्यतया दुधमा २ किसिमका प्रोटीन हुन्छन कैसीन (casien )र ह्वे (whey -serum) प्रोटीन। गधाको ‘लो कैसीन प्रोटीन’ दुधबाट पनीर बनाउने आइडियाका क्रममा उनलाई यसको प्रविधि हात लाग्यो र उनले गधाको दुधबाट पनीर बनाउने सफलता पाए।